मेरो फ्रिकोनोमिक्स - राम्रो मजदूरीको साथ तपाईंको बजेट बचत गर्नुहोस् Martech Zone
मंगलवार, जुलाई 25, 2006 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
मैले भर्खर पढ्न पूरा गरें फ्रिकोनोमिक्स। यो एक समय भएको छ जब म व्यापार पुस्तक राख्न सक्दिन। मैले शनिबार रात यो पुस्तक किनें र आइतवार पढ्न शुरू गरें। मैले यो केहि मिनेट अघि समाप्त गरें। म स्वीकार गर्दछु कि यसले मेरो बिहान पनि लिएको छ, मलाई कामको लागि ढिलो गरेर। यस पुस्तकको मूलमा अद्वितीय परिप्रेक्ष्य छ कि स्टीभन डी। लेविट्ट ले परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा लिन्छ।
मेरो बौद्धिकता, हिज्जे र व्याकरणमा के कमी छ - समाधानको सिफारिस गर्नु अघि म सबै परिप्रेक्ष्यबाट समस्या हेर्ने प्रयासमा अविश्वसनीय परिश्रम गर्छु। अधिक भन्दा धेरै पटक, अरू कसैले वास्तवमा सही समाधान खोल्छ किनकि म अधिक र अधिक जानकारीको लागि प्रिस गर्दछु। कलिलो उमेरदेखि नै मेरो बुबाले मलाई सिकाउनुभयो कि कामको सट्टा सबैलाई पजलको रूपमा हेर्नु रमाईलो छ। कहिलेकाँही गल्तीको लागि, यो भनेको म कसरी सफ्टवेयर उत्पाद प्रबन्धकको रूपमा मेरो काममा पहुँच गर्छु। 'परम्परागत विस्डम' हाम्रो कम्पनीको आन्तरिक बुद्धि देखिन्छ। अधिकांश भागका लागि, व्यक्तिहरूले 'सोच्दछन्' उनीहरूलाई थाहा छ ग्राहकहरू के चाहान्छन् र सहि समाधानको विकास गर्न कोसिस गर्छन्। हामीले राखेका टोलीले अब त्यस दृष्टिकोणलाई प्रश्न गरिरहेको छ र वास्तवमै सबै साझेदारहरूसँग कुराकानी गरेर बिक्रीबाट समर्थन गर्नका लागि ग्राहकहरूदेखि लिएर हाम्रा बोर्डरूममा मुद्दा हल्लाउँदैछ। यस दृष्टिकोणले हामीलाई समाधानहरूमा पुर्‍याउँछ जुन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो र सुविधाहरूको लागि हाम्रो ग्राहकहरूको भोक मिल्नुहोस्। हरेक दिन समस्या हो र समाधानको दिशामा काम गर्नुहोस्। यो ठूलो काम हो!
मेरो सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत 'फ्रेकनोमिक्स' तब भयो जब मैले पूर्वमा एउटा अखबारको लागि काम गरें। म जे भए पनि श्री लेविट जत्तिकै उज्यालो कसैको बराबरीमा छैन। यद्यपि हामीले पनि त्यस्तै विश्लेषण गरेका थियौं र एउटा समाधान आए जुन कम्पनीको परम्परागत बुद्धिको अभाव भएको थियो। त्यस समयमा हामीसँग 300 भन्दा बढी पार्टटाइम व्यक्तिहरू थिए बिना लाभ र अधिकतम न्यूनतम ज्याला वा बढि माथि। हाम्रो कारोबार भय was्कर थियो। प्रत्येक र प्रत्येक कर्मचारीलाई अर्को कर्मचारीले प्रशिक्षण दिनुपर्दथ्यो र उत्पादक स्तरमा पुग्न केहि हप्ता लाग्यो। हामीले डाटामा घोपराएका छौं र पत्ता लगायौं कि (कुनै छक्क पर्दैन) कि त्यहाँ तिर्नु पर्ने दीर्घायुको सम्बन्ध छ। चुनौती भनेको 'मिठाई ठाउँ' फेला पारिरहेको थियो ... मान्छेहरूलाई उचित ज्याला तिर्ने जहाँ उनीहरूले आदर गरेको महसुस गरे, जबकि यो सुनिश्चित गर्दै कि बजेटहरू उडाएनन्।
धेरै विश्लेषण मार्फत, हामीले पत्ता लगायौं कि यदि हामीले over १०० डलर खर्च गरे जुन हामी we २०० के ओभरटाइम, कारोबार, प्रशिक्षण, इत्यादिका लागि थप तलब लागतमा पुनःपूर्ति गर्न सक्दछौं भने हामी $ १००k खर्च गर्न सक्दछौं र अर्को १०० डलर बचाउन सक्दछौं र सम्पूर्ण समूह बनाउँदछौं। मान्छे खुशी! हामीले ज्याला बढ्ने एक टायर्ड प्रणाली डिजाइन गरेका थियौं जुन दुबै हाम्रो सुरुको तलब र साथमा विभागका सबै कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइयो। त्यहाँ मुठ्ठीभर कर्मचारीहरू थिए जसले उनीहरूको सीमा नाघेका थिए र उनीहरूले बढी प्राप्त गरेनन् - तर हामीले महसुस गर्‍यौं कि उनीहरूलाई राम्रो तलब दिइएको थियो।
परिणामहरू हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै थिए। हामीले वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग $ २k० बचत गरेर घायल गरेका छौं। तथ्य यो हो कि ज्यालामा लगानीले डोमिनो प्रभाव पायो जुन हामीले भविष्यवाणी गरेका थिएनौं। बढि उत्पादकत्वको कारण ओभरटाइम तल गयो, हामीले प्रशासकीय लागत र समयको एक बचत गर्‍यौं किनभने प्रबन्धकहरूले भाडामा लिने काम र प्रशिक्षणमा बढी समय खर्च गरे र अधिक समय व्यवस्थापनको लागि व्यतीत गरे, र कार्यबलको समग्र नैतिकतामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। उत्पादन बढ्न जारी रह्यो, जबकि हाम्रो मानवीय लागतहरू कम भए। हाम्रो टीम बाहिर, सबैले आफ्नो टाउको कोरेरिरहेका थिए।
यो मेरो गर्वपूर्ण उपलब्धी मध्ये एक हो किनकि म दुबै कम्पनी र कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्न सक्षम थिएँ। परिवर्तनहरू प्रभावकारी भए पछि केही कर्मचारीहरूले व्यवस्थापन टोलीलाई स्वागत गरे। छोटो अवधिको लागि, म विश्लेषकहरूको रक स्टार हुँ! मेरो क्यारियरमा मैले केहि अन्य ठूला विजयहरू पनि पाएँ, तर कसैले पनि खुशीयाली ल्याएन जुन यसैले गर्‍यो।
ओह ... र भुक्तानीको कुरा गर्दै, के तपाईले मेरो साइट जाँच गर्नुभयो, वेतन कैलकुलेटर? यो वास्तवमा मेरो पहिलो जाभास्क्रिप्ट रमाईलो थियो ... धेरै चन्द्रमा अघि।
Godin: अंतर्ज्ञान बनाम विश्लेषण
मैले भर्खर केहि हप्ता पहिले फ्रीकोनोमिक्स समाप्त गरें। तपाईं आफैंको वास्तविक संसार फ्रिकोनोमिक्स कथा कसरी पढ्नुभयो भनेर रमाईलो।
जुलाई,, २०१ at 27::2008। बिहान
यो आश्चर्यजनक हो कि कसरी एक सबैभन्दा उपयोगी र अन्तर्दृष्टि पुस्तक लिन र एक rambling तरिका मा आफ्नो जीवनमा यसलाई लागू गर्न सक्छन्
मैले एक ग्रीष्मकालमा मैले इन्ट्रो इकोनॉमिक्स कोर्सको सम्झना दिलाउँछ
त्यहाँ एक मध्यम उमेर महिलाहरू थिइन् जसले आफैलाई कथित बौद्धिक क्षमताले आफूलाई प्रभाव पार्न कोर्स गरे
जे भए त्यो विषय उनको जीवनसँग सम्बन्धित थियो र उनी र उनको परिवारले आफ्नो आर्थिक र भौतिक जीवनमा कत्ति राम्रो गरिरहेछन्।
चाखलाग्दो परिप्रेक्ष्य। म मेरो 'बुद्धिमत्ता' लाई पुस्तकसँग जोड्न कोशिस गरिरहेको थिइन। जसले मलाई चिन्छ म जान्दछु कि म नियमित मान्छे हुँ। म आशा गर्दछु कि तपाई छोटो रहनु हुनेछ र केहि अरु पोष्टहरु पढ्नु भन्दा पहिले तपाईले छोटो आँखाको बयान गर्नु भन्दा पहिले।
पुस्तकको उद्देश्य भनेको मानिसहरूलाई पारम्परिक तर्कको बाहिर सोच्न लगाउनु हो। मेरो माथिको उदाहरण मात्र अपराकृतिक सोचलाई सुदृढ पार्नको लागि एक उदाहरण हो। धेरै कम्पनीहरूले विश्वास गर्दैनन् कि तपाई मानिसहरूलाई पैसा तिर्नु भन्दा पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ - यो एकदम राम्रो छ र मेरो काम यसको लागि लाइनमा थियो।
मेरो टीमले हासिल गरेकोमा म गर्व गर्दछु जब हामी यो गर्‍यौं र म यसलाई आफ्ना पाठकहरूसँग बाँड्न चाहान्छु।
र - हो - म रम्बलिंग गर्न स्वीकार गर्दछु।